Fampiharana lisansa mpamboly asa-tanana any Illinois | Ahoana ny fomba fangatahana mpamboly asa-tanana
Ahoana ny fomba ahazoana lisansa mpamboly asa-tanana any Illinois
Te hahazo fahazoan-dàlana hamboly asa-tanana?
Lisansa mpamboly asa-tanana any Illinois
Ahoana ny fomba ahazoana lisansa mpamboly asa-tanana any Illinois?
Raha te-ho tonga mpamboly asa tanana any amin'ny fanjakan'ny Illinois ianao dia tsy maintsy mandefa ny fangatahana fahazoan-dàlana hamboly asa-tanana avy amin'ny orinasa ny orinasanao Departemantan'ny fambolena. Mba hahafenoana mari-pahaizana licence growers, ny mpangataka dia tsy maintsy mahazo farafaharatsiny 75% amin'ireo isa azo.
Amin'ny fihodinana 2020 an'ny taona 40, ireo mpangataka mpanao asa-tanana izay mahazo farafahakeliny 75% amin'ireo teboka dia afaka mahazo fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly asa tanana. Ny fahazoan-dàlana dia homena voalohany ireo mpangataka isa ambony indrindra, avy eo midina mandra-pahatongan'ny loka rehetra. Noho izany, ny fahazoana ny isa be indrindra azo zahana isaky ny fizarana amin'ny fampiharana dia tena zava-dehibe.
Amin'ny taona 2021, fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly asa tanana 60 hafa no homen'ny Departemantan'ny Fambolena any Illinois amin'ny fotony iray ihany - raha tsy hoe misy fanitsiana, misoratra anarana ao amin'ny taratasim-panoratanay hijanona eo ambonin'ny Nahazoana alalana ny rongony any Illinois vaovao.
Inona ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly asa tanana any Illinois Cannabis?
"Mpamboly asa tanana" dia midika fotodrafitrasa ampiasain'ny fikambanana na orinasa nahazo alalana avy amin'ny Departemantan'ny Fambolena mba hamboly, hamaina, hanasitranana ary hanangonana rongony ary hanao hetsika ilaina hafa mba hampisy ny rongony amidy amin'ny fikambanana mpaninjara na ampiasaina amin'ny fikambanana mpanodina. Ny mpamboly asa tanana dia mety hahatratra 5,000 metatra toradroa ny velarana malalaka amin'ny tranony ho an'ny zavamaniry amin'ny voninkazo. Ny sampan-draharaha misahana ny fambolena dia afaka manome alalana ny fiakarana na fihenan'ny toerana fambolena voninkazo amin'ny fisondrotana 3,000 metatra toradroa amin'ny fitsipika mifototra amin'ny filan'ny tsena, ny fahaizan'ny mpamboly asa tanana, ary ny tantaran'ny fanarahan-dalàna na ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny tompona fahazoan-dàlana, miaraka amin'ny habaka 14,000 metatra toradroa ho an'ny mamboly zavamaniry eo amin'ny sehatry ny voninkazo, izay tsy maintsy ambolena amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fitomboana amin'ny faritra voahidy sy azo antoka.
Mpamboly asa tanana any Illinois Application PDF
Fampahalalana momba ny fangatahana fahazoan-dàlana an'ny mpamboly Illinois Craft
Ny State of Illinois dia naka fanontaniana avy Ny fangatahana lisansa Craft Grower.
Namporisihina ny mpangataka mba hametraka fanontaniana an-tsoratra amin'ny Departemanta momba ny fampiharana, ny fitaovan'ny fangatahana na ny fizotry ny fampiharana. Ny Departemanta dia handefa ny valiny amin'ny daty roa araka ny voalaza etsy ambany. Ny departemanta dia mety mamintina fanontaniana mifandraika ary tsy hamoaka ny valiny amin'ny fanontaniana miverimberina, fanontaniana tsy misy ifandraisany amin'ny fizotran'ny fampiharana, na fanontaniana hypoththical manokana.
Fanontaniana sy valiny momba ny fangatahana lisansa ataon'ireo mpamboly asa tanana any Illinois
Ny departemanta ao amin'ny Fambolena ao Illinois dia handefa ny fanontaniana ho azony sy ny valintenin'ny departemanta amin'ny daty roa. Ny valiny voalohany amin'ny valiny, ho an'ny fanontaniana voarain'ny Departemanta tamin'ny 5:00 hariva ny 14 Janoary 2020, dia halefa amin'ny 5 ora hariva ny 00 Janoary 21. Ny valiny faharoa amin'ny valiny, ny fanontaniana voaray tamin'ny 2020:5. ny 00 janoary 28, dia halefa amin'ny 2020:5 hariva ny 00 febroary 4. Ny departemanta dia hamerina ny mombamomba ny mpangataka amin'ny fanontaniana sy valiny napetraka. Tsy hamaly ireo fanontaniana na fanontaniana tsy voasoratra ny departemanta taorian'ny 28 Janoary 2020. Ny fanontaniana dia azo apetraka amin'ny: [email voaaro]
Fampirantiana fampiharana ny lisansa mpamboly asa tanana any Illinois
A: Ny fampifandanjana ny filokana atolotra
Ny fangatahana ny mpisolo vava ilay soso-kevitra dia tsy maintsy: (1) mampiseho fa mety ny fitrandrahana natokana ho an'ny fambolena voan'arizo mahomby sy azo antoka; (2) mampiseho ny fahafaha-mameno ny fangatahan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fivoaran'ny asa tanana amin'ny fomba azo antoka sy mahomby amin'ny fiantraikany kely indrindra amin'ny tontolo iainana sy ny manodidina; ary (3) manome drafi-drafitra fitantanana sy fitantanana. Isan'ny isa: 75 pejy fetra: 50
B: Sarotra amin'ny drafi-piofanana momba ny mpiasa
Ny fahaizan'ny mpangataka drafitra fanofanana momba ny mpiasa dia tokony: (1) mamaritra drafitra ho an'ny mpiasa izany dia hanome sy hiantoka mpiasa sy traikefa sahaza ho an'ny orinasan-tserasera azo idirana, famokarana azo antoka, fanadiovana, fiarovana ary fisorohana ny halatra; ary (2) manome boky torolàlana ho an'ny mpiasa izay hanome ny mpiasa torolàlana amin'ny fitantanana sy ny politikan'ireo fotodrafitrasa. Isa totaliny: fetra 50 pejy: 15, tsy anisany ny kopian'ny boky torolalana natolotra
C: Drafitra fiarovana ary Mitahiry firaketana
Ny mpangataka dia tsy maintsy: (1) maneho ny fahaizany misoroka ny fangalarana na fanodihodinana rongony ary ny fomba hanampian'ny drafitra ny ISP, ny Sampana ary ny mpampihatra lalàna eo an-toerana amin'ny fanatanterahana ny andraikiny amin'ny fampiharana ny lalàna, ao anatin'izany ny porofon'ny fanarahana ny zavatra rehetra ao amin'ny Fizarana 1300.355, 1300.380 , ary 1300.385 amin'ny lalàna maika; (2) mampiseho fa ny drafitra fitahirizany ny rakitsoratra, ny fanaraha-maso ary ny fanaraha-maso ny lisitra, ny fifehezana kalitao ary ny fiarovana ary ny politika sy ny fomba fiasa hafa dia hanakorontana ny hetsika tsy ara-dalàna, ao anatin'izany ny famaritana ny drafitry ny mpangataka hifarimbona sy hanary rongony tsy ampiasaina na mihoatra an'izay miaraka amin'ny ISP. ary ny Departemanta; (3) mamaritra ny toerana mihidy sy mihidy mba hiarovana sy hitahirizana rongony sy ny fepetra fiarovana an'ny Mpangataka, ao anatin'izany ny fepetra rehefa mikatona ny toerana hanaovana asa sy ny fepetra noraisina mba tsy ho hitan'ny besinimaro ny rongony; (4) Ny mpangataka dia tsy maintsy manome ny volavolan-keviny hangataka fahazoan-dàlana ho an'ny mpitatitra na drafitra hiara-miasa amin'ny mpitatitra manana fahazoan-dàlana sy ny fombafomba amin'ny fandefasana am-pilaminana ireo vokatra rongony sy rongony any amin'ireo orinasa ana rongony. Misy fanampiana vaovao maromaro ao amin'ny drafitra fiarovana cannabis ny sasany amin'ireo zava-nisongadina dia samy rakitsoratra 90 andro eo an-toerana ary 90 andro ny firaketana rahona tsy maintsy misy ho an'ny fanjakana. Ny fampiharana fambolena asa tanana any Illinois dia tsy mitaky mpiambina hijanona eo amin'ny toerana misy azy mandritra ny ora fiasana. Isa feno: 145 pejy fetra: 65
D: Drafitra Fambolena
Ny mpangataka dia tsy maintsy: (1) mamaritra ny drafitra entiny hanolorana famenon-tsiram-bokatra tsy misy hatak'andro ho an'ny dispensaries voasoratra; (2) maneho ny fahalalana momba ny fomba fambolena ampiasaina, ao ny lalantsara samihafa tokony hovolavolaina sy ny traikefa azon'ilay Mpangataka, raha ilaina, miaraka amin'ny fitomboana ireo vovobony ireo na ireo vokatra mitovy amin'ny fambolena; (3) asehoy ireo dingana tokony hatao mba hiantohana ny kalitaon ny cannabis, ao anatin'izany ny fahadiovana sy ny fijanonana, ny cannabis izay atolotra ho an'ny dispensaries. Isan'ny isa: 75 pejy fetra: 50
E: Drafitra momba ny fiarovana sy ny fametrahana label
Ny mpangataka Craft Grow dia tsy maintsy: (1) mamaritra ny drafitra momba ny fonosana sy ny fametahana marijuana azo antoka sy marina; (2) mamaritra ny drafitra andrana amin'ny fitsapana rongony ary manome antoka fa tsy misy loto ny rongony rehetra; (3) mamaritra ny drafitra napetrany amin'ny fametrahana fampatsiahivana vokatra raha sendra kilema na vokatra ratsy ateraky ny mpanjifa, ao anatin'izany ny fomba hamantarana ny vokatra, fampandrenesana ireo dispensary sy / na mpanjifa, ary fanariana ireo vokatra naverina. Isa feno: 95 pejy fetra: 55
F: Drafitra asa sy serivisy ho atolotra
A drafitra fandraharahana rongony ho an'ny mpangataka fahazoan-dàlana ho an'ny mpamokatra asa tanana dia tokony:
manome drafitra fandraharahana izay mamaritra ny fomba fikasan'ny mpamboly asa tanana amin'ny fotoana maharitra, ao anatin'izany ny famaritana amin'ny antsipiriany momba ny vola sy ny loharanon'ny fananana vola sy ny trosa ary ny fahaizan'ny ara-bola;
mampiseho sy / na mamaritra ny zavatra niainan'ny Mpangataka na ny tompon'andraikitra, ny mpikambana ao amin'ny birao, na ny mpampiditra ao amin'ny fitantanana orinasa, ity indostria ity, na ny fambolena sy ny fambolena, ary ny habetsaky ny fandraisan'izy ireo anjara na fahaizana mitaona ny asa andavan'andro ny fotodrafitrasa;
manomeza fandaharam-potoana fanombohana izay manome fotoana tombanana manomboka amin'ny fankatoavana ny fahazoan-dàlana mankany amin'ny asa feno, sy ny fototry ny vinavina. Tokony hampidirina ao anatin'izany ny fanambarana iray fa ny mpangataka fahazoan-dàlana dia afaka mampiseho ny traikefa na fanao ara-barotra izay mampiroborobo ny fanamafisana ara-toekarena any amin'ny faritra misy fiantraikany ratsy.
Isa feno: 110 pejy fetra: 60
G: Mpangataka fitoviana ara-tsosialy
Ireto ny fepetra ara-dalàna momba ny fangatahana ara-tsosialy ara-tsosialy izay efa nosoratanay - Kitiho eto raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny singa mpangataka ara-tsosialy momba ny fahazoan-dàlana mitombo ny asa-tanana.
Isa 200 - tsy misy fetra pejy.
H: Fomba fiasan'ny mpangataka fahazoan-dàlana amin'ny asa tanana sy ny asa
Ny mpangataka dia tsy maintsy: manome drafitra hanomezana toeram-piasana azo antoka, mahasalama sy ara-toekarena ho an'ny mpiasa, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ihany, ny drafitra momba ny fiarovana ny tontolo sy ny fenitry ny tontolo iainana, ny fitsipi-pitondrantena, tombontsoa ara-pahasalamana, tombontsoa amin'ny fanabeazana, tombontsoa fisotroan-dronono fenon-karama velona, ​​ary miditra amin'ny fifanarahana fandriampahalemana amin'ny mpiasa. Isan'ny isa: 20 fetra pejy: 10
I: Drafitra momba ny tontolo iainana
Ny mpangataka dia tsy maintsy: (1) manome na mampiseho drafitra hampihenana ny dian-tongotra karbon, fiantraikany amin'ny tontolo iainana, ary ny filàna loharanon-karena amin'ny famokarana cannabis sy; 2) manazava drafitra rehetra momba ny fampiasana angovo hafa, fikarakarana rano fako sy fandosirana ary fikarakarana ny rivotra mifanakalo. Isan'ny isa: 20 fetra pejy: 10
J: Voafehina na tompony ilay trano fonenana tany Illinois
Ireo mpangataka fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly asa-tanana dia tsy maintsy manambara raha voafehy na tompon'ny trano ny mpangataka. Raha toa ny mpangataka dia tsy mampihatra hoe voafehy na tompon'antoka amin'ny Resident Illinois, dia tsy mila manome fanazavana fanampiny ao amin'ity Exhibit ity ny mpangataka. Raha toa ny mpangataka dia mangataka ho tompon'antoka amin'ny tompona tany Illinois, ny mpangataka dia tsy maintsy: manome rakitsoratra momba ny hetra manaporofo fa ny fotodrafitrasa dia ho fehezin'ny olona iray na olona iray izay mponina Illinois nandritra ny 51 taona lasa. Isa feno: 5 pejy fetra: tsy misy
K: Mifindra na tompona trano ny veterana
Ny mpangataka dia tsy maintsy manambara raha voafehy na tompona ny mpangataka. Raha ny mpiadina dia tsy voafehy na manana fananana, dia tsy mila manome fanazavana fanampiny ao amin'ity Exhibit ity ny mpangataka. Raha mpangataka dia mangataka ho fananan'ny Veteran na voafehy, ny mpangataka dia tsy maintsy: manome porofo manamarina fa ny fotodrafitrasa dia ho voafehy 51% na fananan'ny veterana iray, araka ny voafaritry ny Fizarana 45-57 amin'ny fehezan-dalàna momba ny fividianana Illinois (30 ILCS 500). Isa feno: 20 pejy fetra: tsy misy
L: Drafitra fanandramana
Ny mpangataka dia tsy maintsy: manome fitantarana iray izay mametraka tanjona ny fahasamihafana eo amin'ny fananana, ny fitantanana, ny asa ary ny fifanarahana mba hahazoana antoka fa omena fitoviana ny mpandray anjara sy vondrona samihafa. Isan'ny isa: 100 fetra pejy: Tsy mihoatra ny 2500 teny
M: Fizarana Bonus (Safidy)
Raha sendra misy ny laharam-pahamehana amin'ny fampiharana ny Craft Grower, ny departemantan'ny fambolena any Illinois dia afaka manome isa bonus 2 ho an'ny hetsi-kevitra tian'izy ireo nefa tsy takiana amin'ireto sokajy manaraka ireto: (1) drafitry ny tombotsoan'ny fiaraha-monina, (2) , (3) tatitra momba ny fiarahamonina / mpiara-monina eo an-toerana. Raha mandefa an'io Fampirantiana io dia tsy maintsy: ny mpangataka dia: milaza ny sokajy (na sokajy) izay fahazoan-dàlana nomen'ny mpangataka valiny. Ny sokajy tsirairay sy ny valiny mifanaraka amin'izany dia tsy maintsy asiana marika mazava. Isa feno: 2 isaky ny sokajy fetra: 10 isaky ny sokajy
N: tompona fananana
Ny mpangataka dia tsy maintsy mandefa antontan-taratasy samihafa arakaraka ny satan'ny mpangataka amin'ny maha-tompona azy. Raha nampanofaina ny mpangataka ny fananana ilay toerana natolotra, ny mpangataka dia tsy maintsy manolotra: kopia iray amin'ny fanofana, fanamafisana ny fananan-tany, famantarana ny olona manana trosa sy / na tompon-trosa, fanambarana an-tsoratra avy amin'ny tompona trano sy / na tompon-trano manamarina ny fanekena toeram-pivoarana asa-tanana hoentin'ny mpangataka farafahakeliny hatramin'ny 31 Desambra 2021, ary raha misy, fanamarinana ny fampandrenesana ataon'ny tompona trano amin'ny tompon-trosa rehetra sy / na tompon'antoka tompon'antoka tonga lafatra fa ny fananana dia tokony hampiasaina fotodrafitrasa fampiroboroboana asa tanana farafaharatsiny hatramin'ny 31 desambra 2021, ary ekena izany alain'ireo mpampindram-bola sy / na tompon-trosa tonga lafatra.
Raha tsy tompon'ny trano na ampanofaina ny mpangataka amin'izao fotoana izao, ny mpangataka dia tsy maintsy manolotra: fanambarana an-tsoratra avy amin'ny tompona fananana sy / na tompon-trano manamarina ny faneken'ny mpangataka hofa trano na hividy ny tany ho an'ny fikarakarana toeram-pambolena asa tanana farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny 31 desambra 2021, ary raha azo ampiharina, ny fanamarinana ny fampandrenesan'ny tompona trano amin'ny tompon-trosa rehetra sy / na tompon'antoka tompon'antoka tonga lafatra fa hampiasaina ho toeram-pambolena asa tanana farafaharatsiny hatramin'ny 31 desambra 2021, ary hanaiky izany ny misy mpampindram-bola sy / na tompon-trosa tonga lafatra. Raha manana ny fananana ny mpangataka, ny mpangataka dia tsy maintsy manolotra: fanamafisana ny fananan-tany, fanondroana ny tompon-trosa rehetra ary na tompon'antoka tompon-trosa tonga lafatra, ary raha misy, fanamarinana ny fampandrenesana amin'ny tompon-trosa rehetra sy / na tompon-trosa tonga lafatra fa ny fananana dia hampiasaina ho toeram-pambolena asa tanana farafaharatsiny hatramin'ny 31 Desambra 2021; ary hanaiky izany amin'ny alàlan'ny mpampindram-bola sy / na tompon-trosa tonga lafatra. Ferana pejy: tsy misy
O: Fampandrenesana ny fampiasana ny tsara
Ity fampirantiana ity dia misy ampahany roa: ny iray ho vitan'ny Mpampihatra, ary ny iray hovitana amin'ny manampahefana zoning eo an-toerana. Tsy maintsy vita ireo lafiny roa ireo.
P: Fampahalalana momba ny fandrindrana sy famatsiam-bola mahaliana
Ny mpangataka fahazoan-dàlana dia tokony hamoaka ny fampahalalana ara-bola rehetra mifandraika amin'ny mpamboly asa tanana. Rehefa mamaly ity fampirantiana ity dia amporisihina ireo mpangataka mba hamerina hijery ny famaritana ny hoe "zana-bola" amin'ny lalàna, 1300.305 sy 1300.300 (c) (22) - (27). Ny mpakafy asa an-tsokosoko dia tsy maintsy manome:
1. Ny firafitry ny fananana ny mpiroboroboana ny asa tanana, ao anatin'izany ny tombotsoan'ny fananana olona tsirairay na orinasa. Izany dia tokony hamantatra ireo tompon'andraikitra lehibe rehetra sy ny orinasam-barotra izay amin'ny alàlan'ny fomba mivantana na ankolaka, mitantana, manana na mifehy ny tombotsoan'ny fananana mpanefy Craft Grower. a. Ny mpangataka dia tsy maintsy milaza ny karazana orinasa itiavany azy: ny tompona tokana, ny fiaraha-miasa, ny fiaraha-miasa voafetra, ny fiaraha-miasa voafetra, ny fikambanam-bola voafetra, ny orinasam-pifandraisana voafetra, na ny hafa.
i. Ny tompona solosaina dia tsy maintsy manome anarana, trano fonenana, ary daty nahaterahan'ny tompony. II. Ny fiaraha-miasa rehetra dia tsy maintsy manome ny anarana sy ny adiresin'ireo mpiray antoka rehetra, na ankapobeny na voafetra, ary antontan-taratasin'ny fiaraha-miasa. III. Fiaraha-miasa voafetra, fiaraha-miasa voafetra, orinasa, ary orinasa voafetra dia tsy maintsy manome kopia ny taratasy fanamarinana misy ary kopianny taratasy fanamarinana mijoro avy amin'ny sekreteram-panjakana any Illinois, navoaka tao anatin'ny 60 andro farany. IV. Ny orinasam-pifandraisana voafetra dia tsy maintsy manome kopia ny Article an'ny Organisation ary ny lisitry ny mpikambana ao amin'ny orinasa tompon'andraikitra voafetra sy ny mombamomba ny fifandraisana amin'izy ireo. v. Ny orinasa dia tsy maintsy manome kopia ny Fanoratana momba azy ireo, ary ny kopia fanoratana anarana anarana navoakan'ny Sekreteram-panjakana raha ilaina izany. Ny orin'asa dia tsy maintsy manome ny anarana sy ny adiresin'ireo tompon'antoka rehetra sy talen'ny orinasa.
1. Ny orinasam-bahiny rehetra dia tsy maintsy manome ny antontan-taratasy mihatra amin'ny sokajin'izy ireo etsy ambony, miampy kopia iray amin'ny Certificate of Good Mijanona avy amin'ny faritry ny fampidirana azy ireo, ary ny kopian'ny Taratasim-pahefana navoakan'ny sekreteram-panjakana ao Illinois.
2. tabilaon'ny fandaminana ankehitriny an'ny Craft Grower, ao anatin'izany ny famaritana ny toerana sy ny anarana ary ny famerenan'ireo olona manana toerana. Ampidiro ny fahaiza-manao fanampiny, ny fanabeazana na ny traikefa mifandraika amin'ny mpamokatra asa tanana izay tsy tafiditra ao amin'ny famerenan'ny mpiasa.
3. Ny dika mitovy amin'ny fifanarahana fanonerana, fifanarahana momba ny fitantanana, fifanarahana famatsiana, na antontan-taratasy ara-bola eo anelanelan'ny sy ny mpisolo vava sy ireo olona manana tombontsoa ara-bola sy / na fifehezana eo amin'ny mpahazo fahazoan-dàlana, ao anatin'izany ny mpamboly, ny tompony ary ny manampahefana, na ny fitantarana raha ny fifanarahana am-bava.
4. Antontan-taratasy manorina fa ny mpangataka dia manana $ 20,000 farafahakeliny vidin-tsolika.
5. Ny zavakanto sy ny karazana fatorana miavaka, fampindramam-bola, tsipika momba ny trosa, sns., Na namoaka na novonoina, na tokony hamoaka na hamonoana, mifandray amin'ny fanokafana na fampandehanana ny mpanamboatra mpamorona asa tanana.
6. Fampahafantarana ny loharanom-bola rehetra ampiasaina amin'ny fahazoana na mamolavola ny orinasa mpamokatra asa tanana sy ny antontan-taratasy amin'ny famatsiam-bola toy izany. Ny mpangataka dia tsy maintsy hamita ny takelaka etsy ambany ho an'ny olona na orin'asa izay fantatra ao amin'ny fampahalalana etsy ambony.
F: Mpanolotsaina voalohany na Fanambaram-pahafahan'ny mpikambana ao amin'ny birao
Ny endrika mpiandraikitra ny asa an-tsitrapo an'ny Craft Grower dia tsy maintsy tanterahina isaky ny tompon'andraikitra ambony sy / na mpikambana ao amin'ny birao. Ity endrika ity dia tsy maintsy fenoina na dia eo aza ny mety hisehoan'ny fampahalalana duplikatif.
R. Fanambarana notarized
Ny mpangataka ny mpanao asa tanana dia tsy maintsy manao sonia ary manazava fanambarana izay manome manokana fa tsy hanao zavatra sasantsasany izy, ary ny fampahalalana ao amin'ny fangatahana ny mpamboly asa dia marina ary marina.
S: Famoahana fakan-tànana amin'ny fanontana
Ny mpangataka fahazoan-dàlana hamboly asa tanana dia tsy maintsy mameno ny Fifanekena Fampandrenesana sy ny endrika fampandrenesana momba ny sidina ary alefany mivantana amin'ny mpivarotra scan mivantana. Ity endrika ity dia tsy tokony ampidirina ao amin'ny Application. Ny mpangataka dia tsy tokony hanova ny anaran'ny Agence fangatahana, ny fangatahana maso ny famantarana ORI, ny fangatahana adiresin'ny masoivoho na ny kaodin'ny tanjona kendren'ilay endrika.
Te hanokatra fitomboana asa tanana
Ahoana no fomba hahatongavanao amin'ny sehatry ny asa tanana any Illinois
Izahay dia handrakotra ireo rindranasa izay ahafahana miditra amina mpiangona vaovao miisa 150 ao amin'ny tsenan'ny fambolena ao Cannabis ao anatin'ny taona ho avy.
Mba hanampiana ny olona hahita ity fampahalalana ity momba ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly asa-tanana - ravao ny tiana ary misoratra anarana. Andao hiresaka andalana fotoana sy izay miditra amin'ny fangatahana hahazoana fahazoan-dàlana. Ity dia fomba lava be - fa raha mijanona hatramin'ny farany ianao dia ho fantatrao ny valin'ny fanontaniana "cIzaho dia manana asa-tanana mitombo, mpampiditra ary dispensary iray ao amin'ilay trano iray ihany raha samy manana ny anjarany manokana sy manana lisansa izy ireo ?? Hmm… tsara, ndao hojerentsika ny momba ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hitombo ny asa-tananao.
Firy ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly asa tanana ao Illinois?
Ny sampan-draharahan'ny fambolena dia - takiana izany - manome lisansa mpamokatra asa tanana hatramin'ny 40 jolay amin'ny 1 Jolay 2020, ary tsy afaka mivarotra izany fahazoan-dàlana izany izy ireo raha tsy amin'ny 21 desambra 2021. Ary koa amin'ny 21 desambra 2021, ny departemantan'ny fambolena dia hamoaka iray hafa Lisansa mpamboly asa tanana 60 any Illinois. Aorian'ny 1 Janoary 2022, ny departemantan'ny fambolena dia mety hampiakatra ny isan'ny mpamboly asa tanana ary hanova ny fangatahana fahazoan-dàlana - saingy tsy mihoatra ny 150 ny mpamboly asa-tanana ao amin'ny fanjakana.
Fahazoan-dàlana vaovao ho an'ireo mpamboly rongony fanombohana any Illinois.
Andao hiresaka momba izay tsy maintsy ampidirina ao amin'ireo fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ireo mpamboly asa tanana 100 any Illinois.
Ny andininy 30-10 amin'ny lalàna dia mandrakotra ny fangatahana. Tsidiho ny tranokalanay momba ny mpisolovava amin'ny indostrian'ny rongony raha te hanana rohy hampidina ity fizarana ity ianao hahafahanao manana kopian'ny fepetra takiana hanampiana ny orinasanao rongony misokatra any Illinois.
Ahitana ny fampiharana:
Saram-pitsarana tsy azo averina $ 5,000 - $ 30,000 ny saram-pananana raha toa ka iray amin'ireo vintana voafantina voafidy ny fangatahanao.
Ny ara-dalàna ho an'ny mpanamboatra asa tanana
Ny adiresy ara-batana natolotry ny mpanamboatra asa tanana
Ny anarana, adiresy, laharam-piarovana ara-tsosialy, daty nahaterahan'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny mpikambana ao amin'ny birao mpampivelona asa tanana - izy rehetra dia tokony 21 taona farafahakeliny.
Ny antsipirian'ny fizotran-kevitra momba ny fitantanana na fitsarana (fitsarana) izay misy ny olona avy amin'ny fangatahana 4 no nanao heloka, na nanala ny fahazoan-dàlana na naato.
Soso-kevitry ny lalàna mifehy ny lalàna mifehy ny fanaraha-maso ny mpanamboatra asa an-tsokosoko, anisan'izany ny fampandrosoana sy ny fampiharana ny rafitra fanaraha-maso ny zavamaniry, ny fitandremana tsara ny firaketana, ny drafitry ny mpiasa, ary ny drafitry ny filaminana nankatoavin'ny Departemantan'ny polisy. ho an'ny Oktobra 2019- Ny famoronana ara-batana dia hatao amin'ny herin'aratra isan-kerinandro amin'ny alàlan'ny mpanamboatra asa.
-Jereo, izany no antony nilazako tamin'ny olona taloha fa ho lafo ny vidiny, misokatra ny orinasa marobe, tsy manamboatra ireo antontan-taratasy fitantanana rehetra ireo talohan'ny nahazoana alalana hisokatra amin'ny asa aman-draharaha - ka izany no antony handoavan'ny consultant vola am-polony raha tsy an'arivony dolara hanampiana ny orinasanao hahazoany fahazoan-dàlana hitombo any Illinois, noho izany azafady mba anontanio ireo mpivarotra ireo raha manana adidy iraisana amin'ny orinasanao izy ireo - toa ny mpisolovava anao. Miverina amin'ny takiana rehetra izao.
Fanamarinana avy amin'ny Polisim-panjakana fa ny taratasim-bola rehetra avy amin'ireo manamboninahitra, mpikambana ao amin'ny birao ary ireo sampan-draharaha amin'ny orinasam-barotra cannabis dia natao.
Kôpikin'ny zoning an'ny zone ao an-toerana ankehitriny na fahazoan-dàlana sy fanamarinana fa ny mpanazatra ny asa dia mifanaraka amin'ny fitsipika zoning ao an-toerana
Fomba fiasa aroso amin'ny asa - aka boky torolàlana ho an'ny mpiasa - izay mampiseho drafitra asa hampahafantarana, hanakaramana ary hampianarana ireo vitsy an'isa, vehivavy, veterana ary olona manana fahasembanana, mirotsaka amin'ny fomba fanao amin'ny asa marina ary manome fiarovana ny mpiasa.
Asehoy ny traikefa na ny fomba fanao amin'ny varotra izay mampiroborobo ny hery ara-toekarena any amin'ireo faritra tsy misy dikany.
Traikefa amin'ny fambolena ny ag biz na ny asa horticultural
Famaritana ny trano mihidy, voahidy trano izay hihinana ny otrikaretina, ny fijinjana, ny fanamboarana, ny fonosana, na ny nomaniny ho amin'ny fizarana ho an'ny fandefasana ny fandaminana.
Fanadihadiana momba ilay trano mihidy, mihidy, ao anatin'izany ny fambolena
Fambolena, fanodinana, drafitra sy ny drafitra fonosana,
Famaritana ny traikefan'ny mpangataka amin'ny teknolojia ag culosion sy ny fenitry ny indostria.
Lisitry ny mari-pahaizana, mari-pahaizana, na fanandramana mifandraika amin'ny mpiasan'ny mpandraharaha rehetra, mpikambana ao amin'ny birao ary ny gents an'ny orinasa mifandraika amin'izany
Fahafantarana ny olona rehetra manana fahalianana ara-bola na fifidianana 5% na mihoatra
Drafitra iray mamaritra ny fomba hiresaka amin'ny tsirairay ny mpamboly:
Ilaina angovo - ary fananganana fampiasana angovo maharitra
Vaovao momba ny rano sy ny politikam-pamokarana maharitra
Ny fitantanana fako sy ny fampihenana ny fako
Drafitra fanodikodinam-bola ho an'ny mpividy azy ireo, fako azo zarina azo alaina na fanodinkodinam-bokatra
Ankoatr'izay - ny fako rongony rehetra dia hatao tsy afaka ampiasaina hanoto izany amin'ny fako hafa azo zakaina.
Inona no tsy maintsy ataon'ireo mpanazatra amin'ny fitazomana azy?
Fanoloran-tena hanaraka ny fepetra fako eto an-toerana - ary hanaraka hatrany ny fepetra takiana amin'ny federaly sy ny tontolo iainana ao anatin'izany ny fitehirizana ny fako biolojika amin'ny vokatra rongony vita, fanariana fako misy rongony.
Fanoloran-tena amin'ny fenitra ara-teknolojia ho an'ny fahombiazan'ny loharanom-bolan'ny mpamokatra asa tanana - midika izany
Mpamboly asa tanana dia manolo-tena hampiasa loharanon-karena amin'ny fomba mahomby - ao anatin'izany ny herinaratra sy rano ho an'ny fambolena rongony ary mahafeno na mihoatra ny fepetra takian'ny teknolojia ho an'ny
Miankina amin'ny haben'ny canopy misy karazana HVAC ampiasaina
Tafiditra ao anaty rafitra fanondrahana automatique
Raiso ny fandehan'ny rano amin'ny rafitra.
Izay fampahalalana hafa takian'ny fitsipika.
Hizaha - tsara tarehy mandroso. Fohy ny tantara - ny fampiharana ny asa tanana dia hitaky fotoana lava aminao ary izany no mahatonga ny mpanolo-tsaina ho eo hivarotra anao amin'ny fomba fanaovan-javatra sy ny antony mahomby, fa alohan'ny hanaovanao izany - azafady mba jereo ny fomba hamaritana ny fangatahana. .
Famaritana ny firoboroboan'ny asa tanana
Mitodika any amin'ny fizarana 30-15 amin'ny lalàna momba ny asa tanana izahay hahazoana ny isa. Tsy tena voaresaka tsara ireo teboka ireo, saingy azontsika atao ny manao amboletra ny matematika maminavina ny 78% amin'ireo teboka tsy manazava mivantana.
Fahamendrehana ny trano naroso
Mety amin'ny drafi-piofanana ho an'ny mpiasa
Fiarovana sy firaketana an-tsoratra
Ny fiarovana ny vokatra sy ny drafitry ny mari-pamantarana
Ny satan'ny mpangataka amin'ny maha-mpangataka ny ara-tsosialy - rehefa vita io video io - apetrako eo ambony io rohy io. - Ity no laharana voalohany omena, tsy latsaky ny 20% ny isa azo alefa amin'ity sokajy ity - ka farafaharatsiny 20% ny fanapahan-kevitra dia ity, aza raharahina amin'ny loza mety hitranga raha tianao ny fahazoan-dàlana.
Ny fomba fanao amin'ny asa sy ny asa - izay tsy ho latsaky ny 2% ka hatramin'ny isa rehetra azo alaina - izay 10x latsaka ny atahorana tsy raharahina noho ny fitoviana ara-tsosialy, nefa mbola manana fomba fanao tsara asa,
Drafitra momba ny tontolo iainana momba ny asan'ny fambolena toa ny HVAC, H20, ny fahombiazan'ny angovo ary ny drafitra teknolojia.
Ny fitomboana ny asa tanana dia mihoatra ny 51% ananan'ny mponina Illinois
Mitombo ny asa tanana dia mihoatra ny 51% na fananan'ny vazaha
Drafitrasa iray samihafa izay misy fitantarana tsy mihoatra ny 2,500 XNUMX teny izay mametraka ny tanjonao ny fahasamihafana eo amin'ny fananana, ny fitantanana, ny asa ary ny fifanarahana
Na inona na inona ny departemantan'ny ag dia mety araky ny fitsipiky ny teboka
Tombontsoa 2 ho an'ny drafitry ny mpiasan'ny fiaraha-miasa hifanerasera amin'ny vondrom-piarahamonina, saingy io ihany no omena raha toa ka mifatotra ny fangatahana ny faritra iray.
Raha mandresy ianao - dia misy drafitra apetrakao amin'ny asan'ny asa-tananao ho lasa fepetra momba ny fahazoan-dàlana - ny tsy fanarahana ny politikanao sy ny fomba fanao manokana dia hampiharihary fa miteraka fahaverezan'ny fahazoan-dàlana ny asa-tananao - noho izany dia tsara kokoa ny tianao holazaina amin'izay lazainao amin'ny fangatahanao .
Tena mila lisansa mpamboly asa-tanana ve ianao?
Whoa, fantatro - marina? Adala lava ity rindranasa ity & raha mandresy ianao dia lasa fepetra apetrakao amin'ny fahazoan-dàlana. Fa raha tianao izany ary mila fampahalalana bebe kokoa, misoratra anarana amin'ilay fantsona ary omeo zohy ny zoro mikasika ny atiny mba ho betsaka kokoa ao anaty fahana anao.
Afaka mifandray amin'ny Dispensary any Illinois ve ny fitomboana asa tanana?
Araka ny pejy faha-215 amin'ny lalàna - ny mpamboly asa tanana dia mety mizara trano amin'ny infuser na dispensary - ary asaivo mizara ny faritra iraisana toy ny efitrano fisakafoanana, efitrano fisakafoanana, fandroana ny mpiasan'izy ireo.
Indray andro any, ny firoboroboan'ny asa-tanana dia mety ho orinasa rongony iray manontolo manomboka amin'ny voa ka hatramin'ny amidy - ho hitantsika eo.
Misaotra anao nanatevin-daharana ahy tamin'ity fizarana ity - tadidio fa volana vitsivitsy sisa dia ara-dalàna ny marijuana - koa manomboha mametraka ny drafitrao hambolena. Ary raha mila ny fanampiako ianao, mpisolovava rongony google fotsiny dia mifandraisa amiko. Milamina daholo!
Antsoy izahay (309) 306-1095 || mailaka Us [email voaaro]